Yako Yekupedzisira uye Yakazara Email Tumira Yekutarisa! | Martech Zone
Yako Yekupedzisira uye Yakazara Email Tumira Yekutarisa!
China, Gunyana 18, 2014 China, Gunyana 18, 2014 Douglas Karr
Haimbokundikani… kanenge kamwe pasvondo ndinowana email yakanaka mubhokisi rangu rekunyora iyo yakanzi FNAME kana iri kollaji yemifananidzo isina chinhu isina imwe meseji. Kana ini ndinozviwana pane yangu retina inoratidzira ine yakajeka mifananidzo. Kana ini ndinoivhura parunhare mbozha uye handigone kuverenga nekuti iyo nharembozha email yaisadaira.
Email ibhizimusi rakakomba… mvumo-based push push kuti bhizinesi rako rinosundidzira pamberi peanokunyorera. Email inboxes dzakazara uye munhu wese arikutsvaga chikonzero chekurerutsa mutoro uye kuzvinyoresa. Izvo hazvitore zvakawanda kuti zvivharwe, kukandwa mufaira reSAMP, kubviswa usati watombovhurwa, kuchizonyorwa - kana chakaipisisa - uchinzi uri SPAM.
Chikwata paemail Monks chiri pairi zvakare, kubva kune zano pamusoro kuisa vhidhiyo muemail kune izvi - a yakazara yekutarisa yevanotumira email kufamba usati watinya tuma!
Yasvika nguva yekuti iwe utumire email kune vako vanonyorera uye iwe unotya ku wokudhinda SEND nekuti hauna chokwadi kana wawana zvese mushe, asi usazvidya moyo kwete maMonks kununura zvakare! Nemabhizimusi achitaura kuti vachadaro wedzera kushandiswa kweemail kushambadzira mu2014, zvakakosha kuti uve nerakajeka runyorwa rwekuteverwa usati warova SEND. Saka heino yakakwana yako iwe!
Rondedzero yacho inokufambisa kuburikidza nekutumira email, email mutengi kuenderana, inbox previews, uye yakavhurika preview kuona kuti zvese zvinotaridzika zvakanaka uye zvinoshanda musati watumira! Kana iwe uchida, iwe unogona kunyange dhawunorodha vhezheni yekudhinda kuti ugare padhesiki rako padhuze newe!
Tags: UNOGONA SPAM kutevedzeracan-spamchecklistemail analyticsemail mushandirapamwe analyticsemail yekutarisaemail mutengi kuenderanaemail kuendesa yekutarisaemail tsokaemail html fomatiemail mufananidzo alt tagsemail zvinongedzoemail yakavhura previewtsambambozha personalizationemail yakajeka mavaraemail purogiramu zuvaemail snippet zvinyorwaemail yemagariro ekugovana mabhataniemail spam bvunzoemail chinyorwa mutsaraemail kuzvinyoresa kubatanaemail maonero onlinemaemail paawakubva pakeromufananidzo alt tagsronga hutsananachinyorwa chikamukuverengapindura kukeromutsara wenyayakutaura
Agile Kushambadzira ndeye Evolution, Kwete Shanduko, uye Nei Uchifanira Kuitora Iyo